Thu, Mar 21, 2019 | 17:48:12 NST
ओलीको गाडीमा देउवाको हेण्डब्रेक
माओवादीसँग तालमेल गरेर चुनाव जितेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबारतिर फर्केर बसेको दुई हप्ताभन्दा बढि भैसक्यो । तर उहाँको खुट्टा जहाँको त्यहीँ छ । अघि बढ्न सिंहदरबार खालि भैसकेको छैन । ओलीलाई सिंहदरबार लैजाने गाडीमा अहिले देउवाको हेण्डब्रेक लागेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा पहिले स्थायी बसोबास गर्ने मानव समुदाय गोपालवंशी(यादव) गण थियो । नेपालमा राज्य उत्पत्तिको प्राचीन इतिहास पनि यहीँदेखि सुरु भएको मानिन्छ । त्यसपछि यस उपत्यकामा करिब एक हजार वर्ष किरात जातिको गण राज्य रह्यो ।
​प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पार्टी अध्यक्ष ओली !
काठमाडौं, पुस १४ –ढिलोचाँडो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदैछ । चुनावी नतिजाले नै दुई पार्टीलाई एकतामा बाँधिसकेकाले यसबाट पछाडि हट्ने अवस्था अब छैन । जुन तथ्यलाई दुवै दलका नेताहरुले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
रानीपोखरीको इतिहास : विद्यासुन्दर दूरदर्शी बन्दैछन् कि तानाशाह ?
आम जनमानसका साथै बौद्धिकहरुमा समेत भ्रम छ, रानीपोखरी काठमाडौंको मात्रै सम्पदा हो । वास्तवमा आजभन्दा ३ सय ४९ वर्षअघि रानीपोखरीको प्रतिष्ठा नेपाल सम्वत् ७९० अर्थात् विक्रम सम्वत् १७२५ आश्विन मासे शुक्लपक्ष सोमबारका दिन हुँदा तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले यस पोखरीमा काठमाडौंको मात्रै पानी हाल्न लगाएका थिएनन् ।
सिंहदरबार यात्रामा ओलीको आफ्नै अडान बाधक : ठूलो दलको ठूलै छाती खै ?
काठमाडौं, पुस १० –नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै अघि बढाउने उद्घोष गरिसकेका दुवै दलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने निश्चितजस्तै भैसकेको छ । तर सिंहदरबारतिर मुन्टो फर्काएर उभिएका ओलीको पाइला जहाँको त्यहीँ छ, अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्वस्थ हुन कसरी खाने ?
काठमाडौं, पुस ९–हामीले खाएका हरेक कुराहरुले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । खाएका वस्तुहरु धेरै मलमूत्रको रुपमा निश्कासन भए पनि त्यसको रसहरुले हाम्रो शरीर बढ्ने गर्दछ ।
कांग्रेस हार्‍यो, तर देउवा र देशले हारेनन्
यो सफलताले यसअघि देउवामाथि लाग्दै आएको ‘असक्षम’ र ‘भर पर्न नसकिने’ नेताको उपनाम च्यातिएको छ । नेतृत्वकर्ताका हैसितमा सम्बन्धित पार्टीलाई चुनावमा सफलता दिलाउन सक्नु नेतृत्वकर्ताको पहिलो कर्तव्य हो । तर, योपटकको चुनावमा देउवा त्यो दायित्व पूरा गर्न चुके पनि देशप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहभन्दा किन १० प्रतिशत कम भोट खस्यो ?
आइतबार पहिलो चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा स्थानीय तहमा खसेको भन्दा कम मत खसेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा झण्डै ७५ प्रतिशत मत खसेपनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशत मात्र मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
​केटा र केटीबीच विवाह कसरी जुराइन्छ ?
कुर्सी नपाउँदासम्म कुकुर बिरालालाई पनि ढोग्छन्, कुर्सीमा पुगेपछि मान्छे नै चिन्दैनन्
घर झापा विर्ता शनिश्चरे हो । तर काठमाडौं बसेकै ११ वर्ष भैसक्यो । बानेश्वरमा सिलाईको काम गर्दै आएकी छु । झापाको भन्दा काठमाडौंको समस्या बढी देख्छु म त । मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भनेको यतिका भैसक्यो आएको छैन । बाटोमा धुलोधुवाँले हिँडिसक्नु छैन ।
बम पड्काउनेले बुझ्न नसकेको यथार्थ
देश चुनावको मुखमा छ । नेता, कार्यकर्तादेखि आमनागरिकलाई चुनाव लागेको छ । दलहरुको घोषणापत्र र नेताहरुले भाषणमा भनेजस्तो देशले छिटै काँचुली फेर्छ भन्नेमा नागरिकलाई विश्वास त छैन, तर चुनावले लामो समयदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्छ भन्ने आशा चाहिँ सबैमा छ ।
घर कुन दिशामा फर्केको राम्रो ?
वास्तुशास्त्र अनुसार विभिन्न दिशाहरुको विभिन्न स्वभावहरु छन् । दिशाहरुको स्वभाव अनुसारका संरचनाहरु त्यस दिशामा बनाउनु राम्रो मानिन्छ । पूर्व दिशाबाट सूर्योदय हुने भएकाले यस दिशाबाट निकै राम्रो उर्जाहरु आउने मान्यता रहेको छ ।
हिजोआज मानिस हिँड्न छाडे । विकासले जहाँतहाँ बाटो खुल्दा हिँडेर जाने ठाउँमा सवारी साधन प्रयोग हुन थाले । डेरीमा जाँदा क्यान र मान्छेलाई मोटरसाइकलले लैजान्छ । बसको प्रयोग हुन्छ । गाउँ गाउँमा चाउमिन, चाउचाउ, आलु चिप्स, तारेका खानेकुरा पुगे ।
त्यतिबेलाका नेता पनि अरुलाई कल्याण गर्ने भन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउने खालका थिए । आफ्नै लागि मात्रै सम्पत्ति जोरौं भन्ने खालका थिए । मैले त ‘प्रधानपञ्च, केटाकेटी बुढाबुढीको सप्पै खाउ भन्छ’ भन्ने गीत नै बनाएको थिएँ ।
​ भूकम्प पीडितका लागि मेरा दुई मुख्य एजेण्डा छन्
हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा छाैं । त्यसैले पहिलो आवश्यकता अस्थाई टहरा र पालमा बस्नुभएका भूकम्प प्रभावितलाई छानामुनी राख्नुपर्ने छ ।
धन्य ! आफैँ मृत्युको समाचार बन्नु परेन
लगत्तै काठमाडौँकै साथीले फोन गरेर सुनायो ‘त्रिशुलीमा बिहानै ५ बजे यात्रुबाहक बस खसेको छ । राजबिराजबाट आएको । अहिलेसम्म चार जनाको ज्यान गएको छ । बाँकी विवरण आउन बाँकी छ । अलि ख्याल गरेर आउनु ।’
हिँड्दा हिँड्दै थच्च बस्न पाइयोस् । भेटेका कुरा कप्प खान पाइयोस् । अल्छि लागे सुत्न पाइयोस् । खुशी मानेर दौडन पाइयोस् । पैतलाले जहाँ मन लाग्छ टेक्न पाओस् । आँखाले जे मन लाग्छ देख्न पाओस् । यसो नगर भन्ने कोही नहोस् । यसो गर भन्ने कोही नहोस् ।
बर्षेनी हजारौ नेपाली युवा रोजगारका निम्ति विदेश राष्ट्रमा जाने गरेका छन् । धेरै नेपाली युवाको गन्तब्य बन्ने अर्को राष्ट्र हो जापान मिैले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको कृषि पढ्ने विधार्थीबीच भएको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जापान जाने मौका पाएको थिएँ ।
कोटको शिरान तिरका खुलै छोडिएकाले टाँकले छातीमा 'भि' आकारको डिजाइन बनाएका । वाह्य आवरणको त्यो आकर्षक डिजाइनले उघारेको भु-भाग छोप्न सेतो रंगको भित्री । कोटको माथिको गोजी रहने स्थानमा एयरलाइन्सको लोगो र नामथर स्पष्ट लेखिएको ट्याग । दबेका जस्ता देखिने सम्याइएका शालीन वक्षस्थल ।
हरेक सिनेमा यो काल्पनिक कथामा आधारित छ भनेर सुरु हुन्छ । त्यो भन्दा अघि सिनेमा सम्बन्धी नियमनकारी निकाय सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र सेन्सर बोर्डले चलचित्र हेर्छ । कानुनले बन्देज गरेको कुरा भए त्यसलाई काट्छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अप्रत्यासित हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जुन गठबन्धन थियो र दुवै सरकारमा थिए । जसका कारण कांग्रेसको लागि यो ठूलै अचम्म भयो होला ।
जुत्ता सिलाउने सियो, कैँची, हम्मर नै मेरा साथी
इच्छा यही छ, जुत्तामा सियो गाड्दा गाड्दै, सोलमा हम्मर ठोक्दाठोक्दै एक मुठ्ठी सास जाओस् ।
एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टीले चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता नै गर्ने भए भन्ने सुन्दा अझै पनि धेरैलाई विश्वास लागेको छैन । दसैँको रमझम नसकिँदै एकाएक देखिएको राजनीतिक तरंगले धेरै आश्चर्य चकित भएका छन् ।
नाना, पापा, चिची र टिकीको औधी रहर हुने त्यो दसैँ
बाले नयाँ ल्याउने समयभन्दा अघि नै जुत्ताचप्पल फाट्यो भने खाली खुट्टा नै हिंड्नुपथ्यो । पैतालामा काँडा बिझाउँदै र दशतिर ढुंगोमा औंला ठोकाउँदै यसरी खाली खुट्टा धेरै हिंडियो । खाली खुट्टा हिंड्दा ठेस लाग्ला भनेर कति पटक त दुई औंला धागोलेसमेत बाँधियो । यसो गर्दा ठेस लाग्दैन भनेर आमाले भन्नुहुन्थ्यो ।
हातखुट्टा रहेनछ भन्ने थाहा पाउन आठ वर्ष लाग्यो
म तीन चार वर्षको भएपछि सडकमा मसिना सिन्का तथा काठका टुक्राहरु टिपेर चित्र कोर्न थालें । बाटोमा हिँड्ने मानिसले मैले बनाएको चित्र मन पराएर मलाई कलम र कापी ल्याइ दिनुहुन्थ्यो । मैले बिस्तारै कलमको सहायताले चित्र बनाउन थालें ।
आंशिक प्राध्यापकले यसपटक दसैँ किन नमनाउने ?
आंशिक प्राध्यापकका माग पुरा गराउन माग गर्दै डा. महेशकुमार गजुरेलले आमरण अनशन शुरु गरेकाले त्रिवि सबै आंशिक प्राध्यापकले यो वर्षको दसैँ नमनाउने घोषणा गरेका छन् ।
दसैँमा कस्तो मासु राम्रो ?
दसैँमा त पेटभरी मासु खाने हो भन्ने धारण अहिले पनि व्याप्त छ । शरीरको आवश्यकता भन्दा बढी मासुखाँदा स्वास्थ्य बिग्रने प्रायः निश्चित छ । चाडबाडको बेलामा खानपानमा ध्यान नदिँदा अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले खानपानमा उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
चिकित्सक तथा क्षतीपूर्तीका कुरा
चिकित्सक भएपछि टन्नै पैसा कमाइन्छ अरु कुनै पेशामा यो देशमा पैसा कमाउन सकिन्न भन्ने अवधारण छोरा छाेरीको दिमागमा छिराइन्छ, त्यसो हुँदा त्यस्ता चिकित्सकले चिकित्सकीय मुल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर पैसा सोहोर्नतिर मात्र लाग्ने हुन्छन् ।अनि चिकित्सक जसतो मर्यादित पेशालाई बदनाम गराइरहेका हुन्छन् ।
दसैंमा परदेशीको चिठी
आमाको कपाल ढकमक्क फुलिसक्यो होला । बुवाको अनुहार पनि चाउरिन थाल्यो कि ! बुवालाई घर व्यवहार चलाउन गाह्रो परेको छ होला । छोराले भनेजस्तो पैसा पठाएन भनेर मनले थकथकी मान्दै होला । सोच्नु हुँदो हो, अनि कहिलेकाहीँ त मेरो फोटो सुम्सुम्याउँदै भन्नुहुँदो हो यस्तै मात्र पैसा कमाउने भए विदेश नगएको भएपनि त हुन्थ्यो नि नाथु !
२ नम्बर प्रदेश समीक्षा : कांग्रेस पहिलो निश्चित, फोरमलाई प्रचण्डको सक्रियताले धोका !
संविधान बनाउँदाको अनुभव : धारा पारित गर्दा पानी पनि खाइन
लामो छलफल र संवादपछि घोषणा भएको नेपालको संविधान, ७० वर्षदेखिको नागरिकको चाहना र भावना पूरा भएको त्यो क्षण मलाई झल्झल्ली याद आउँछ । निकै गर्व लाग्छ त्यो क्षण सम्झँदा पनि । संविधान घोषणा नहुन्जेलसम्म संविधान घोषणा नगर्न धरै ठाउँबाट दबाब आयो ।
काठमाडौं, असोज २ – २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावसँगै संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक कार्यदिशाको बाटो थप फराकिलो बन्दैछ । राजपाको सहभागिता नै तेस्रो चरणको चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।